Yini okufanele ugqoke ku-prom?
Sekusehlobo kakade ekhaleni, okusho ukuthi sekuyisikhathi sokuhlolwa, bese-ke ... iqembu eliqedelwe isikhathi eside! Lena umcimbi othakazelisayo futhi ojabulisayo kuwo wonke umfundi noma umfundi. Kodwa yini okufanele ugqoke kuleli holide? Ngukuphi ukugqoka okumele ukhethe? Phela, amafasitela esitolo namabhulogi omagazini agcwele izingubo ezihlukahlukene zazo zonke izinhlobo zendwangu, izitayela nezithunzi! Ake sibeke konke ngokuhlelekile.
Kubonakala sengathi kungaba lula ukukhetha izingubo zokugubha kusihlwa? Zonke izinkinga zokulungiselela nokudlula izivivinyo sezivele zivele ngemuva, ngaphambi kwesikhathi kuphela esingakhathazeki (ngisho noma singapheli isikhathi eside) nokulindela impilo entsha endala. Ngakho-ke nje udinga ukungeza ubuciko futhi wena uyindlovukazi yebhola! Kodwa ukuphila kubeka konke endaweni yayo, futhi labo abaqala ukucabanga kanjalo, empeleni, babhekene nezinkinga ezithile. Ukhetho lokuphothula iziqu kanye nezembatho akuwona umsebenzi olula futhi kudinga amandla nesibalo esithile.
Ukubheka kuyinto eyinhloko
Sonke siyazi ukuthi ukuphothula iziqu kuyisimo esiyingqopha-mlando, esidlula lapho, umfana wesikole ozoba yindodakazi ekhulile eyayizimele. Lesi yisikhathi lapho intombazane uqobo isivele ikhetha futhi ilandele isithombe esifuna ukuyovela ngaphambi kobana afunde nabo. Abaningi abaqeqeshwe iziqu, bezama ukugcizelela isimo sabo somuntu omdala, ngezinye izikhathi bahamba ngezici zalokhu "abadala".
Ngokuvamile amantombazane akhetha ama-nightclub ama-chic nama-sexy avela amahle kakhulu esitolo sesitolo, omagazini bemfashini noma emaphepheni obomvu endaweni ethile e-Cannes. Kodwa lezi zigqoko ezibizayo zingabhekwa ngisho nabesifazane abaqinile (okukhulunywa ngabo, ngokuqondile, basungulwa) babukeka bengenangqondo. Yini esingayisho ngabesifazane abasha abasanda kuphuma futhi baphuma esikhungweni sesikole? Kuyadabukisa nakakhulu ukubona izingane ezifunda esikoleni, zimbethe i-latex eqinile nesikhumba noma epaki eliziqhenya. Phela, umgomo oyinhloko wesigqoko sokugqugquzela ufana nokufaniswa kwesigqoko kuze kube seminyaka yenkosikazi yakhe.
Sihamba ubusuku bonke
Futhi, esinye sezikhathi ezibalulekile zomgqoko wokugcoba, ngokuyisimanga, kuyenzeka. Phela, ku-rauta-amadamu asemhlabeni kuphela, agqoke izingubo eziqinile-ngesitimela eside kanye nezicathulo eziphakeme, kufanele kancane kancane ahambe ngendlela bese ebeka phambi kweparazzi, bese ehlala phansi e-limousine bese ehamba. Futhi intombazane e-prom ayikwazi ukuma: idansa ubusuku bonke, egibela isikebhe esishisayo futhi ubusuku obude ehamba edolobheni. Lapha, ngisho nokuphikisana kakhulu akukwazi ukumelana nokulahla izicathulo zokugubha, esikhundleni sokugqoka okungenakukwazi ukuphefumula, bazogqoka ama jeans ezindala okunethezeka. Futhi masinyane yonke i-gloss and chic. Kodwa kungani uphendukela kudada elimnandi phakathi, uma ungaqala ukukhetha okuhle, kodwa ngesikhathi esifanayo isembatho esikahle nesisebenzayo?
Yini engiyifunayo kusuka ekuphothuleni?
Ngaphambi kokuba uvele esikoleni, udinga ukuzibuza, yini ngempela engifuna ukuyithola kulobu busuku, ngiyiphishekela yini injongo? Okokugcina, ukudukisa umfana othandeka isikhathi eside, emncintise ngokubonakala kwakhe okungenakuphikiswa, ukukhombisa isikhundla esiphakeme sezezimali somndeni wakhe? Khomisa izingane ezifunda nabo, ngubani phakathi nezifundo zakho ezikubheke njengomfundi onomzimba omuhle kakhulu, bese uziveza njengombhobho wesondo phambi kwabo? Noma ingabe ufuna ukuzijabulisa nabangani bakho futhi ugcine izinkumbulo ezimnandi kulobu busuku obalulekile? Kuye ngomgomo, kudingeka ukhethe isembatho, kwimeko ngayinye izohluka ngokuphelele.
Njengomthetho, igqoko lokugqoka, kanye nesigqoko somshado, sigqoke kanye kuphela ekuphileni, futhi lokhu kwenzeka njalo ngoba ingubo ithengwe kakhulu ukuthi awukwazi ukugqoka noma ikuphi. Ivisit into enhle idabukile ekamelweni, ukuqoqa uthuli. Ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki, zama ukukhetha into encane kakhulu. Futhi ukuhlobisa nokunikeza ubunikazi kanye nokuqala kokunye okunjalo kuzosiza izesekeli. Lapha unganikeza isifiso somcabango ngokugcwele! Kungaba amasongo angavamile, ubuhlalu namacici. Angagcinwa iminyaka eminingi, njengememori yalesi senzakalo esihle.
Uma ulandela amathiphu alula, umbuzo othi "Yini okufanele ube nayo ku-prom?" ngeke uhlushwa isikhathi eside futhi ukhetho lwezingubo ngeke luxazulule izinkinga. Ngenhlanhla, izitolo zanamuhla zihlinzeka ngokukhethwa okukhulu kwezingubo ezahlukene kakhulu. Futhi imfashini yamanje ayinqume imithetho ethile eqinile ye-flooring nesitayela sesigqoko se-prom.
Kodwa-ke, kunezinye amaphuzu okudingeka zicatshangelwe uma ukhetha indwangu, isitayela nombala wengubo.
Njengoba ukuphothula iziqu kwenzeka kaningi ehlobo, uma kushisa ngaphandle futhi kuyakufaneleka, kunengqondo ukukhetha amakhanda amancane njenge-silika, satin, i-taffeta, i-chiffon ne-satin. Babheka imikhosi futhi bekhangayo ngisho nangemva kwamahora amaningi amnandi, intombazane iyozizwa ikhululekile kuzo. Kodwa ukugqoka noma ukugqoka ngokuphelele akuyona into engcono kakhulu yokuthola iziqu.
Imibala yendabuko yokuphothula iziqu yizo zonke izibani ezikhanyayo: ezimhlophe, beige, ukhilimu, izindlovu zendlovu, uhlaza okwesibhakabhaka, i-pink ngokucophelela. Kodwa kancane kancane lesi siko sesisasebenza kakhulu. Muva nje, ukuthandwa kwabantu abasha kukhula imibala ekhanyayo futhi enomsoco: i-lemon ephuzi, obomvu obomvu, ohlaza okwesibhakabhaka, ocebile okwesibhakabhaka, i-orange enelanga, okusajingijolo, i-lilac. Futhi kuhle! Emva kwakho konke, ngengubo ekhanyekayo yembatho ungakwazi ukuhamba futhi emshadweni wakho, futhi iqembu lokuphothula iziqu liyiholidi losemusha, okufanele lidwetshwe ngemibala ekhanyayo ekhanyayo. Kuvele nje ukushaya shades omnyama kakhulu, njengobumnyama, obomvu, obomvu, obumnyama obuluhlaza, i-burgundy - le mibala kufanele igcinwe izikhwama zebhizinisi.
Iphuka ngokushesha ekugqibeleni izigqoko kanye nemfashini ye-geometry ye-nude. Ungakhathazeki, isihloko sesikole somxantathu we-isosceles asihlangene naso. Imidwebo ye-geometric ephathekayo emakhiweni - lokhu kuyindlela yokugcina. Futhi ungakhohlwa ngemidwebo yembali ethola ukuthandwa.
Isibhulu noma isiketi
Ukuzikhethela phakathi kwesigqoko nesimboti se-trouser kuyinto yendaba yakho siqu. Zombili izinketho zamukelekile ukuphothula iziqu. Kodwa, njengoba umthetho, amantombazane amaningi athetha izingubo. Ngemuva kwalokho, ibhola lokuphothula iziqu lento ethile nebhola, lokho kwakuyisikhathi sokugqoka ingubo enhle. Uma ukukhethwa kwehla kwehla ngokulandelana kwendabuko, kufanelekile ukunaka ubude benguketi. Ungakhethi isiketi eside kakhulu phansi, kulokhu ubungozi ekupheleni kokuhlwa ukuze uthole umsila ongcolile futhi ongcolile, futhi ukudansa ngembatho enjalo akuyona into elula kakhulu. Kodwa umgqobo omfushane kakhulu wokugcoba ufanelekile, uma kungenjalo uzodla ukuchitha konke kusihlwa nje ukuchofoza futhi udonsa isikhwama esincane esikhuphuka ngaphezu kwemilenze.
Uma ukhethe isitifiketi se-trouser, ke ungakhethi ibhulukwe elincane futhi eliqinile - lokhu kuzokhawulela ukunyakaza nokuphazamiseka. Kungcono ukunikeza izintandokazi kumabhulukwe eqondile noma avulekile.
Noma kunjalo into ebaluleke kunazo zonke lapho ukhetha ingubo yokuphothula iziqu, ukuthi uyakuthanda ngempela futhi kwakukuye owazizwa njengendlovukazi yebhola. Futhi konke okunye: isitayela, umbala, indwangu, umhlobiso - futhi.
Yini okufanele ugqoke jeans ezimhlophe?
Isitayela "seNkanyezi": sikhetha izingubo ngesibonakaliso se-zodiac
Umhubhe endlebeni: imfashini noma imbi?
Umfanekiso wesifazane wesimanje webhizinisi
Indlela yokugqoka abesifazane abathandekayo kakhulu?
I-Long Length Skirt
Uzoya kuphi eholidini nomndeni wonke?
Imfundo yobuhle yezingane ezineminyaka ephakeme yasenkulisa
Indlela yokusebenzisa amafutha we-badger ukuphatha izingane
Kalgan nezinye izitshalo eziwusizo
Solyanka kusuka iklabishi
I-Casserole ngenyama enobisi
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha ye-vagin
Endleleni yokuya emsebenzini
Vula ikhekhe le-onion-cheese
Indlela yokusiza ingane isinde ekufeni kwesilwane
Ingulube yengulube, ebhakwa nge-quince namakhowe
Ama-Braised Brussels amahlumela
Ubulili, indlela yokwenza amahle nokuthandana okokuqala
Izinkinga zocansi nabantu